कतारमा हुने सन् २०२२ को विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको सुरक्षा नेपालीले गर्ने ! - Experience Best News from Nepal
कतारमा हुने सन् २०२२ को विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको सुरक्षा नेपालीले गर्ने !
प्रकाशित मिति : मङ्लबार, साउन १, २०७५
कतारमा हुने सन् २०२२ को विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको सुरक्षा ठूलो संख्यामा नेपालीहरुलाई लैजाने प्रस्ताव गरेको छ । मंगलबार नेपालका लागि कतारका राजदूत युसुफ बिन मोहम्मदले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसँगको शिष्टाचार भेटवार्ताका क्रममा सो प्रस्ताव राखेका हुन् । त्यसका लागि छुट्टै सम्झौता गर्न समेत कतार तयार रहेको राजदूत मोहम्मदले गृहमन्त्री थापालाई अवगत गराएका थिए ।